အိန္ဒိယကျားသေဆုံးလေးဦးပြည်သူ့အတွက် 12 နေ့ရက်များ - သတင်း Rule
အိန္ဒိယကျားသေဆုံးလေးဦးပြည်သူ့အတွက် 12 နေ့ရက်များ
တစ်ဦးကရိုင်းကျားမြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယတွင်လေးရွာသားကိုသတ်ပြီဟုယုံကြည်နေသည် 12 လက်ထက်, ရွာသားများအနေဖြင့်ကြီးမားသောကြောင်များနှင့်ဆန္ဒပြပွဲများအဘို့ရှာဖွေမှုများကိုသတိပေး, တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်ကြာသပတေးနေ့.
သားရဲ၏ Uttar Pradesh ပြည်နယ်၏ပြည်နယ်အတွက်ရွာ၌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် 40 နှစ်အရွယ်အမြိုးသမီးတိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်, သူ့ရဲ့စတုတ္ထမြောက်သားကောင်ကထံမှ ထွက်. လည်ပြီထင်နေသည်ကတည်းက ကျားဘေးမဲ့တော, တာဝန်ရှိသူကဆိုသည်.
ပြည်နယ်သစ်တောအရာရှိများနှင့်ရဲ, နှစ်ဦးဆင်ခြင်းဖြင့်ကူညီခဲ့, အဂျင်မ် Corbett အမျိုးသားဥယျာဉ်မှပြန်မောင်း၏မြော်လင့်ခြင်းအတွက် Moradabad ခရိုင်အတွင်းကျားကိုရှာကြပြီ, ခရီးသွားဧည့်နှင့်အတူပေါ်ပြူလာ.
“ကျနော်တို့ကိုသူတို့အံသွားနှင့်လက်သည်းအမှတ်အသားများကိုဘှားမွငျအဖြစ်ကျားအားဖြင့်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းလေးအလောင်းတွေဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ,” အကြီးတန်း Moradabad အုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိတဦး O.P. Narain Singh ကအေအက်ဖ်ပီကိုပြောသည်.
အဆိုပါပြည်နယ်အစိုးရလည်းရှိပါတယ် “တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးတိရစ္ဆာန်တစ် maneater ကြေညာရန်လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ခဲ့” သော protected ကျားကိုသတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်, Singh ကပြောပါတယ်.
အရာရှိများကြောင့်ဂျင်မ် Corbett အမျိုးသားဥယျာဉ်ထံမှ ထွက်. လည်သံသယ — အချို့အိမ်မှာ 200 ကျား — နယ်နိမိတ်အကြောင်းပါပေမယ့် 110 ကီလိုမီတာ (68 မိုင်) Moradabad ခရိုင်မှ.
အိန္ဒိယအချို့နေရာဖြစ်သည် 1,700 ကျား — ကမ္ဘာ့လျှင်မြန်စွာကျုံ့ရိုင်းကျားလူဦးရေရဲ့ထက်ဝက် — ဒါပေမဲ့တရားမဝင်ကျားဖမ်း၏မျက်နှာကိုအတွက်ကြီးမားတဲ့ကြောင်တစ်ကောင်ရဲ့ကျဆင်းမှုရပ်တန့်ရန်ရုန်းကန်ခဲ့, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှောင်ခိုကွန်ရက်နှင့်နေရင်းဒေသများဆုံးရှုံး.
တိုင်းပြည်ခန့်မှန်းခြေမှ၎င်း၏ကျားလူဦးရေ၏မှန်ထုပ်ကိုမြင်ခဲ့ပြီ 40,000 လွတ်လပ်ရေးအပျေါမှာရှိ 1947.
ဤဆောင်ပါး, အိန္ဒိယကျားလေးကလူတဦးသေဆုံး 12 လက်ထက်, ကနေစုစည်းတင်ဆက်သည် AFP သို့ နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်. မူပိုင်ခွင့် 2014 AFP သို့. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
17657	0 ဘင်္ဂလားကျား, အိန္ဒိယ, နယူးဒေလီ
← 3D ကိုပုံနှိပ်စျေးဝယ် Up ကိုခါရန်နောက်နှစ်ဆန်း နှစ်ဦးအရက်မူးရုရှားတစ်ဦးကစားပွဲများအတွက်ကိုယ်ပိုင် ears ကဟာ Off Cut! စိတ်နောက်သော →